कुलमान घिसिङ्ग को कार्यकाल भदौमा सकिदै पुन नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने ले मात्र सेयर गर्नुहोस्! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कुलमान घिसिङ्ग को कार्यकाल भदौमा सकिदै पुन नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने ले मात्र सेयर गर्नुहोस्!
राजनीतिक अस्थिरता सँगै मौलाएका हरेक खाले अनिश्चताले निरा’श बनेका अधिकांश नेपालीले कुलमानको कामबाट उज्यालो मात्र पाएका छैनन्, आशावादी समेत बन्न पुगेका छन्।
२८ सा.उन, काठमाण्डौ ।
झ.ट्ट हेर्दा सा.मान्य,स.रल र न.म्र व्य.क्तित्व अर्थात‘कुल म्या.न’। त.र,उनको कामको करामतले भने निकै वाहवाही पाएको छ । उनले मारेको छ.लाङ र कामको कमालले उन.लाई थुप्रै मा.न पदवी मिलेको छ ।ऊ.र्जासंकट निवारणमा उ.ल्लेख्य भूमिका निभाएको भन्दै सरकारले घि.सिङलाई सु.प्रवल जनसेवा श्री मान.पदवीबाट स.म्मान गरेको थियो । त्यस्तै सिइ.ओ क्लवले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा उनले उत्कृ.ष्ट सिइओको उपाधि हा.त पारेका थि.ए ।
ने.पाल चे.म्वर अ.फ कमर्सले उ न.लाई बे.ष्ट मेनेजरको उपाधि दिएको थियो । यी त केही उदा.हरण मात्रै हुन् ४ वर्षको उपाधि उनले यस्तै थुप्रै उपाधि र मा.न पदवीहरु पाएका छन् । यति मात्रै हो.इन झापाको कन्का.इ नगरपालिका ४ र शिवसतासी नगरपालिका १० को बीचमा पर्ने टेका गाउँबासीले आफ्नो उँको ना.म नै परि.वर्तन गरी ‘कुल.मान घि.सिङ चो.क’ राखेका छन् ।
त्यस्तै घिसिङको जन्मथलो रामेछापको वेथा.न गाउँको एउटा चोकको नामा.करण उनको नाम.बाट गरिएको छ ।उनी रिलका हो.इन रियललाइफका सेलिब्रेटी हुन् । त्यसैले त उनको नामका पछाडि विभि.न्न सम्मा.नजनक ट्यागहरु लगाइएका छन् । उन.लाई कोही भन्छन् उज्यालो नेपालका ना.यक, कोही भन्छन् कु.शल व्यवस्थापकको ‘रो.ल मो.डल’, कतिपयले त उ.नलाई बिजुलीका प.र्याय पनि भन्ने गरेका छन् ।
उनी हुन् ने.पाल वि.द्युत प्राधिकरणका कार्यकारी नि:र्देशक कुल.मान घि.सिङ । रामेछापको वेथानमा वि.सं.२०२७ सा.ल मं.सिर १०गते जन्मिएका कुल.मान घि.सिङ पहि.लोपटक वि.सं. २०५० सा.ल मा सातौं तहका कर्मचारीका रुपमा वि.द्युत प्राधिकरणमा प्र.वेश गरेका थि.ए । ‘साना ज..ल वि.द्युत तथा ग्रा.मीण विद्यु.तीकरण निर्देशनालय’मा उनको पहिलो पदस्था.पन भएको थियो । उनले त्यहाँ बस्दा मुलुकका धेरै ग्रा.मीण क्षेत्रमा भ्र.मण मा.त्र गरेनन्,समा.जलाई नजि.कबाट बुझ्ने अ.वसर पनि पा.ए ।
त्यसपछि उनी वि.भिन्न योजना, परियोजना हुँदै २०७३ भदौ २९ गते ने.पाल वि.द्युत प्राधिकरणको कार्यकारी नि.र्देशक नि.युक्त भएका थि.ए । त्यसअघिको उनको चर्चा परिचर्चा कमै थियो । त.र ज.ब उनी प्रा-धिका.रण कार्यकारी नि.र्देशक ब.नेर त.ब उनको क्रे ज ह्वात्तै बढ्यो । रा.जनीतिक अस्थिरता सँगै मौलाएका ह.रेक खाले अनिश्चताले निरा’श बनेका अधि.कांश नेपालीले कुलमानको काम.बाट उज्यालो मा.त्र पाएका छैनन्, आशावादी स.मेत ब.न्न पुगेका छ.न । उनै घि.सिङ को ४ वर्षे का.र्यकाल आगामी भदौ २९ गते सकिँ.दैछ । योबीचमा उनले प्राधि.करण सुधारका लागि अने.कन कामहरु गरेका छन् ।
Previous दुःखद खबर: घर फर्किन टिकट लिएका नेपाली युवाको परदेशमै गयो ज्यान
Next यदि प्रचण्डले आत्म’समर्पण गरेमा नेकपा जोगिन्छ , नत्र भने प्रधानमन्त्री ओलिले पार्टी फुटा’उनेछन – मातृका यादव
“श्री पाथीभरा माताको, दर्शन गर्नुस, तपाईंको आजको, रासिफल हेर्नुस्, सेयर गर्नुस, चिताएको पूरा हुनेछ।”